Iyo Apple Watch Series haitengesi zvakanyanya zvinoenderana naMing Chi Kuo | Ndinobva mac
Mazuva mashoma apfuura takaona nhau kubva kune watinoshanda naye Nacho, maakataura pamusoro pekufarira kwevashandisi veAirPods nyowani zvichienzaniswa newachi itsva dzekambani, Apple Watch. Ipapo mhedzisiro yacho yaiita kunge yakajeka kune Apple's nyowani AirPods, mahedhifoni asina waya. Apple yanga ichitengesa smartwatch kwenguva yakareba, kunyanya yakaratidzwa munaGunyana 9, 2014 uye yakatanga kutengeswa musi waApril 24, 2015 muUnited States.
Tichireva nezve data rekutengesa, ivo havazi kuzivikanwa zviri pamutemo uye ndezvekuti Apple haina kuita chirevo chepamutemo kusvika parinhasi, asi vaongorori vanoomerera pakuvafungidzira kunyangwe kutaura kuti izvi hazvina kunaka se data re anozivikanwa muongorori Ming Chi Kuo.
Kuo, yambira izvozvo kutengesa kweiyo itsva Apple wachi kuri pakati pe15 kusvika 25% pazasi peiyo yegore rapfuura kunyangwe paine shanduko uye kugadzirisa izvo zvinowedzerwa neApple Watch. Uyu muongorori anozivikanwa ave akarurama pazviitiko zvakawanda nezvakafanotaurwa, asi akatadzawo vamwe vazhinji. Panyaya yewatch yeApple, zvinoita sekunge isu hatizombove nemhando dzekutengesa zviri pamutemo sekunge vanoita nePhones kana maMac, saka vaongorori vanosvetukira mune fungidziro.
Kune rimwe divi, zvakajairika kuti kutengeswa kwemawachi matsva nhasi kwakamira zvishoma uye hazvireve kuti zvakafanira kufunga kuti kutengesa zvimwe chete kuri mukudonha kwemahara, kungoti ivo vashandisi vane yekutanga vhezheni vanoita kwete Tinotenda kuti vanozoshandukira kune inotevera vhezheni kana vakasawana mutengo wakanaka kubva kune yavo kifaa uye ndekwekuti kuita investa yeiyi caliber hachisi chinhu icho munhu wese anogona kuita gore rega. Pamusoro pekutengesa kweiyo nyowani iPhone, iko kunogona kusvika kweMacBook Pro nyowani, vashandisi vanozovhurira maAirPods nevamwe, Vanodzivirira vashandisi kubva kuvhura mukati memavhiki ekutanga kutenga iyo Apple Watch Series 2.
Zviripachena kuti kuvandudzwa kwakakosha mune ino yechipiri vhezheni yewatch uye zvese zvinotanga neprosesa yeiyo wachi, GPS uye ichipera nekushomeka kwemvura, asi isu vedu vane vhezheni yekutanga uye vaona hupenyu hutsva hweizvi newatchOS 3Isu hatisi kumhanyira kuita switch kune imwe yeiyi Series 2s futi, tiri isu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series haitengesi zvakanyanya zvinoenderana naMing Chi Kuo
Apple inoshandura zuva rekuratidzwa kwemhedzisiro yemari